NY ATODIN-GANA SY NY TOMBONTSOA AZO AVY AMINY · L'Homme, son aura et son évolution
> NY ATODIN-GANA SY NY TOMBONTSOA AZO AVY AMINY
Classé dans : — cyrius @ 9:38
Afaka mamboatra couveuse électrique ho anao avy amin’ny fitaovana recyclés ny tenako Cyrius, amin’ny vidiny mirary.
Atodin-gana, hery azo avy amin’ny atodin-gana, misy tombontsoa kokoa ny fihinanana atodin-gana .
Azo akotrika amin’y couveuse vita tanana koa ny gana.
Ahazoana tombontsoa kokoa ny atodin-gana raha oharina amin’ny an’ny akoho.
Mitondra hery kokoa ny atodin-gana noho ny an’itsy farany.
Hevi-diso ny fanondroana ny atodin-gana amin’ny fanapoizinana ara-tsakafo,
Voajanahary mantsy ny atodin-gana ary tsy toy izany kosa ny maro amin’ireo atodin’akoho mitobaka eto amintsika.
NY SINGA MAHAVELONA AO ANANTIN’NY ATODIN-GANA
Betsaka kokoa ny singa ilaina, hita ao anatin’ny atodin-gana raha oharina amin’ny hita ao anatin’ny atoin’akoho, araky ny tabilao eto ambany (%), (vokam-pikarohan’i Kœnig).
Ny singa ao anatin’ny atody :
an’ny gana. an’ny akoho
Rano 71,11 75,67
Proteïnes 12,34 12,55
sira 1,16 1,12
menaka 15,49 12,11
Mavesatra sy lehibe kokoa nefa ny atodin-gana (70 hatramin’ny 80 grama, misy mihoatra aza), raha 50 hatramin’ny 70 grama ny atodin’akoho iray. Tsy amidy amin’ny kilao nefa izy fa amidy tsirairay.
Hitantsika amin’izany fa mihoatra lavitra noho ny hita ao anatin’ny atody hafa ny otrikaina azo avy amin’ny fihinanana atodin-gana.